DAAWO:-Madaxweynaha Puntland oo Kormeeray Xarumaha dowladda ee Badhan | Saadaal Media
DAAWO:-Madaxweynaha Puntland oo Kormeeray Xarumaha dowladda ee Badhan
Sep 20, 2018 - jawaab
Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 20 Sep 2018 kormeeray Xarumaha dowladda ee degmada Badhan. Madaxweynaha Puntland ayaa waxaa kormeerka ku wehelinayey Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Puntland Axmed Cali Xaashi, masuuliyiin ka tirsan geleyaasha dowladda Puntland, guddoomiyaha gobolka Sanaag, maamulka degmada, waxgarad iyo masuuliyiin kale.
Madaxweynaha dowladda Puntland ayaa kormeerkiisa ka bilaabay goobta ay yaaliin qalabka dhismaya wadada Ceeldaahir – Ceerigaabo oo yaalla galbeedka magaalada, Madaxweynahaya ayaa guddiga ka dhegaystay warbixino ku aadaan qaabka ay shaqadu u socoto, isla marnaa waxaa uubogaadiyey dhammaan gudiga iyo shaqaalada wadada dhisaya.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale kormeeray xarumaha Wasaaradaha, Degaanka, Waxbarashada, Haweenka, Caafimaadka, Waxaana uu Madaxweynuhu ka dhegaystay dhammaan masuuliyiinta wasaaradahaasi warbixino ku aadan shaqooyinkooda iyo xaalada gobolka, isla markaana waxaa uu ku booriyey shaqada baaxaddale ee ay u hayaan shacabkooda inay sii laban laabaan oo ay uga soo dhalaalaan si hagar la’aan ah.
Madaxweynaha Puntland ayaa Wasaaradda caafimaadka kula kulmay arday barata caafimaadka gaar ahaan Midwifery ( Umuliso), Madaxweynaha ayaa isuduwaha Wasaaradda Caafimaadka gobolka ku amaanay shaqo wanaag, is xilqaan iyo karti dheeraada oo ay ku hirgelisay waxbarasho caafimaad oo lacag la’aan ah.
Sidoo kale Madaxweynaha dawladda Puntland ayaa degmada Badhan ka dhagax dhigay magaalada Badhan ee xarunta gobolka Sanaag dhisme cusub oo ay yeelan doonto Wasaaradda ganacsiga Puntland, Madaxweynaha Puntland ayaa balan qaaday in muddo ku siman 45 cisho lagu dhammayn doono dhismaha Wasaaradda. Dhinaca kale Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa xadhigga ka jaray bangiga dhexe ee magaalada Badhan oo dhowaan laga hirgeliyey, Madaxeynaha ayaa sheegay in bangigu soo kordhindoono horumar wanaagsan oo leh dhan dhaqaale, dhan horumar iyo dhan isku tashiba.
“Horumar wanaagsan ayuu usoo kordhin doonaa gobolka bangigan aan manta xadhiga ka jarnay, waxaa lagu maamulidoonaa dhaqaalaha magaalada iyo guud ahaan gobolka, wuxuu sahlayaa in si fudud loo helikaro dakhli wanaagsan oo soo xerooda, si fudud loo maamulo si hufanna loo turxaan bixiyo, waxaan rajaynaynaa in dhowaan la hirgelin doono cashuurta ay qaadaan dawladda hoose markaas ayayay Badhani gaadhaysaa horumar baaxad leh”ayuu yiri Madaxweynaha Dowladda.
Ugu danbayn, Madaxweynaha dowladda Puntland ayaa kormeeray cisbitaalka weyn ee degmada Badhan, islamarkaana waxa uu Madaxweynuhu kormeeray dhammaan qaybha kala duwan ee cisbitaalka, isla’marahaantaana Madaxweynaha ayaa dhakhaatiirta cisbitaalka ka xogwaraystay xaaladda cisbitaalka iyo baahidiisa, si kor loogu qaado tayada adeega uu bixiyo cisbitaalku